Wararka Maanta: Arbaco, Oct 27, 2021-Beesha Caalamka oo ka hadashay dagaalka degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud
“Colaaddu ma aha oo kaliya mid sababaysa dhibaato bini’aadanimo oo ku dhacda dadka deegaanka, ee waxay sidoo kale tubta ka leexinaysaa hortabinnada degdegga ah ee dhamaystirka hannaanka doorashada iyo la-dagaallanka al-Shabaab” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Beesha Caalamka.
Xubnaha Beesha Caalamka ayaa sidoo kale dalbaday in xal deg deg ah loo helo dagaalada ka socinaya degmada Guriceel iyo waliba sidii loo caawin lahaa qoysaskii ka barakacay dagaalada ka socda degmada Guriceel.
“Waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada dirirtu ka dhaxayso inay si dhakhso leh u joojiyaan dagaalka oo ay wada hadal ku dhameeyaan khilaafkooda. Saaxiibada caalamku waxay diyaar u yihiin inay taageeraan dadaalladaas haddii ay dhinacyadu codsadaan” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Beesha Caalamka.
Gababgabdii Beesha Caalamka ayaa sheegtay in shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin maamul dowladeed oo wax ku ool ah, waxaana warsaxafadeedka xubnaha Beesha Caalamka uu imaanay xili dagaalo culus degmada Guriceel afartii maalmood ee lasoo dhaafay uu ku dhexmaraayay ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo dhinac ah iyo ciidanka Ahlu Sunna Waljameeca.
10/27/2021 1:59 AM EST